Shaqadan haddii aad ku guuleysato Mareykanka ayaad tageysaa - Muraayad
Home Maskax-fur Shaqadan haddii aad ku guuleysato Mareykanka ayaad tageysaa
Shaqadan haddii aad ku guuleysato Mareykanka ayaad tageysaa
Waa shaqadii ugu fududeeyd ee loo soo bandhigo dadka daafaha adduunka ku kala nool.
Shaqo fudud oo faa;iidow eyn leh | Image Credit: singularityhub
Waxaad is weydiinaysaa waa maxay waxa aan maalin walba sameeyo oon ku heli karo lacag intaas la eg? Shaqadan ayaa aad u fudud, sidaas darteed waxaa suurto gal ah in aad aamini waysid maadaama ay tahay shaqo aan Soomaaliya waligeed ka hirgelin.
Maxaad jeceshahay in aad samaysid marka aad magaalada kusoo daashid oo ay duhur tahay? Jawaabtu waxay u badan tahay in aad seexatid ama qaadatid hurdo si jirkaagu uga nasto daalkii soo gaaray maalintaas.
Dabcan, hurdadu waa ay macaantahay, qof walbana waa uu jecelyahay. Balse ma ogtahay in bani’aadamku aysan wax badan ka ogayn waxa qofka ku dhaca ama jirkiisu sameeyo inta uu kujiro hurdo.
Takhaatiirta ayaa ku kala ra’yi duwan faaiidada iyo dhibaatada ay leedahay hurdada maalintii la seexdo, sidaas darteed, cilmi baareyaasha ayaa sanadahan dambe ku howlan in ay wax badan ka ogaadaan hurdada.
Eachnight waa kambani baaritaan ku sameeya hurdada iyo wax walba oo la xiriira. Waxayna hadda u baahan yihiin in ay tijaabiyaan fikradahooda ku aadan hurdada oo ay ilaa haatan ururiyeen, sidaa darteed, waxay rabaan dad kala shaqeeya cilmi baaristan oo ay u fududahay in ay seexdaan iyaga oo aanan laga qasin hurdadooda maalin walba muddo dhan 30 maalmood. Waxaaba loogu abaalgudi doonaa lacag dhan $ 1,500 (Kun iyo shan boqol oo dollarka maraykanka ah)
Shaqadan ayaa xirmaysa 31-da bishan ee May.
Shaqada hurdadan ayaa ah in aad samaysid dib u eegis ku aaddan isbeddelada dareen ee uu jirkaagu sameeyay iyo saamaynta ay hurdada ku leedahay daalka, jir xanuunka, madax xanuunka, firfircoonida iyo tabarta aad ka heshid hurdada gaaban ee aad heshid maalintii.
Waxaa lagaa doonayaa in aad maalin walba qortid ama kaydisid dareenkaaga guud inta aadan seexanin iyo kadib hurdadaadaba.
Yaa shaqadan ka qayb qaadan kara?
Waxay shaqadan u furantahay dadka adduunka kuwada nool, waddan kasta way u furantahay.
Waxaa khasab ah in qofka uu ka wayn yahay 18 sanno.
Waa in aad ku hadli kartaa, qori kartaa luuqada Ingiriiska
Waa in aad seexan kartaa kaligaaga, waa in hurdada lagaa qasi karin ama aysan jirin cid kaa kicin karto.
Waxaan kugu soo dhawaynaynaa in aad adiga oo jiifa aad lacag samaysid.
Haddii aad isleedahay waad shaqaysan kartaa adiga oo nasanaaya, buuxi foomkan oo dalbo shaqadan.
FG. Dalabka shaqadan waxay xirmaysaa 31-ka bishan May, 2021.
Previous article6 calaamadood oo kuu sheegaya inaad qabto wadne xanuun
Next article4 dabeecadood oo uu leeyahay qofka aan horumarka gaareynin